Nepali Christian Bible Study Resources - प्रोटेस्टेन्ट सुधार (Protestant Reformation)
» अध्ययन मालाहरू » महान् घटनाहरू » १०-प्रोटेस्टेन्ट सुधार
प्रोटेस्टेन्ट सुधार (Protestant Reformation)
पेन्टेकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म भयो (पाठ ९)! शुरू-शुरूमा मण्डली ख्रीष्टको अधीनमै, उहाँकै प्रभुत्वमुनि थियो। साथै मण्डली एउटा बलियो जगमाथि खडा थियो:
वर्षहरू बित्दैजाँदा मण्डली आफ्नो बलियो जगबाट हट्न थाल्यो। मानिसहरू परमेश्वरको वचन बाइबललाई ध्यान दिनुको सट्टामा उनीहरू मानिसका कुराहरूमा ध्यान दिन थाले। ख्रीष्टको नेतृत्व र प्रभुत्वलाई त्यागेर उनीहरू मानवीय धार्मिक नेताहरूलाई पछयाउन थाले। आफूलाई ख्रीष्टियन हुँ भन्ने कतिपय मानिसहरू वास्तवमा साँचो ख्रीष्टियन थिएनन् (२ तिमोथी २:१९)। बप्‍तिस्मा लिने कतिपय मानिसहरू वास्तवमा मुक्ति नै पाएका थिएनन्। यसको परिणामस्वरुप मण्डली बेमेल मिश्रणले भरियो। जुन कुराहरू झूटा र संसारिक थिए ती कुराहरू सत्य र इश्वरीय कुराहरूसँग मिसिन थाले:
समय वित्दै जाँदा समस्याहरू पनि बढ्दै गयो। मानिसहरूले आफ्ना कानहरूलाई चाँडै नै _________बाट फर्काउन थाले (२ तिमोथी ४:४) र उनीहरूले दुष्टात्माहरूको झूटा शिक्षातिर ध्यान दिन थाले (१ तिमोथी ४:१)। आफूलाई धर्मी ठान्नेहरू बाइबललाई विश्वास गर्न चाहँदैनथे, पूरै बाइबलमा भरोसा राख्‍न चाहँदैनथे। यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो शिर र राजा र अगुवा भनी मान्न चाहेनन् (पाठ ६)। उनीहरू पापी मानिसहरूद्वारा नै शासन गरिन र डोर्‍याइन चाहे। यसरी मण्डली ख्रीष्टबाट र बाइबलबाट झन् झन् पर हट्दै गयो अनि यसको परिणामस्वरूप एउटा झूटा धर्म खडा भयो जुनचाहिँ मानिसका विचारमा आधारित थियो र यसको नेतृत्व गर्ने पनि परमेश्वर नभएर मानिस नै थियो। त्यस समयमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरू थोरै थिएः
मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको ज्योतिलाई चम्कन दिएनन् (२ पत्रुस १:१९), यसैकारण अन्धकारको युग (ई.सं. ४७६-१०००) अति अन्धकारमय थियो! यहाँ, त्यहाँ केही विश्वासीहरू फाटफुट थिए जोहरूले आफ्नो ज्योति चम्कन दिए तर ती शताब्दीहरू प्रायः आत्मिक अन्धकार र अज्ञानताका समयहरू नै थिए।
के परमेश्वरले त्यस अन्धकारलाई रहिरहन दिनुभयो? १६ औं शताब्दीमा (करीब ५०० वर्ष अघि) प्रभुले एउटा जर्मन नागरिकको हृदयमा काम गर्नुभयो। उनको नाम थियो, मार्टिन लुथर। परमेश्वरले यस मानिसलाई आफ्नो वचनबाट सिकाउनुभयो अनि लुथरले बुझ्न थाले, बाइबलको शिक्षा रोमन क्याथोलिक चर्चको शिक्षाबाट ज्यादै फरक रहेछ। परमेश्वरको सहायताले लुथरले एउटा नयाँ अभियानको शुरुआत गरे जसलाई प्रोटेस्टेन्ट सुधार अभियान भनियो (“प्रोटेस्ट”, protest,ले अर्थ विरोध गर्नु हो; लुथर त्यसबेलाको धार्मिक प्रणालीको विरोध गर्दैथिए र त्यसबेलाको मण्डलीलाई सुधार गरेर ख्रीष्ट तथा बाइबलतर्फ फर्काएर ल्याउन चाहन्थे):
मार्टिन लुथर र उनलाई पछयाउने मानिसहरूले बाइबलका कतिपय आधारभूत शिक्षाहरूलाई पत्ता लगाउन थाले जुन शिक्षाहरू वर्षौं, शताब्दीयौंसम्म अधिकांश मानिसहरूले गुमाएका थिए।
१. बाइबलको सर्वोपरि अधिकार – (Supreme Authority of the Bible)
प्रभुको बारेमा जान्न र आत्मिक कुराहरू सिक्न मानिस कहाँ जानुपर्छ? जीवन र मृत्यु, स्वर्ग र नरकको बारमा जान्न कहाँ गएर थाह पाइन्छ? मुक्ति र अनन्त जीवन कसरी पाउने भनी थाह पाउन कहाँ जानुपर्छ? यी प्रश्‍नहरूको जवाफ कहाँ पाइन्छ? कसको कुरा सुन्नुपर्छ? कसको कुरा विश्वास गर्नुपर्छ? आफ्नो प्रश्‍नहरूको जवाफ कहाँ पाउन सकिन्छ?
जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूका जवाफ पाउन कुन पुस्तकहरू पढ्नु पर्छ? के कुनै व्यक्तिले आफ्नो उत्तरहरू एक पास्टर वा पादरीबाट लिनु ठीक हो? के पोपसँग सबै जवाफहरू छन्? के क्याथोलिक चर्च वा यहोका साक्षीको चर्च वा अन्य कुनै चृ्चसँग यी जवाफहरू छन्? के मैले परम्परा (मानिसहरूले वर्षौंदेखि विश्वास गर्दै, सिकाउँदै र अभ्यास गर्दै आएको कुनै पनि कुरा) माथि विश्वास गर्न हुन्छ।)?
आत्मिक कुराहरूको विषयमा आधिकारिक मान्न सकिने कुरा कुन हो? मार्टिन लुथरको जवाफ के थियो? उनले आधिकारिक भनेर मान्ने एउटै कुरा थियो, त्यो हो बाइबल, सम्पूर्ण बाइबल, र केवल बाइबल!
उनले आधिकारिक भनेर कुनै मानिसलाई मानेनन्। उनले परमेश्वरलाई नै आफ्नो अधिकारको स्रोत माने। मानव जीवन सम्बन्धि सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नहरूको जवाफ बाइबलले दिन्छ, जुनचाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन हो। प्रोटेस्टेन्ट सुधार अभियान “बाइबल-फर्क” अभियान थियो! अन्धकारबाट उम्कन बाइबलमा नफर्की हुन्न। मार्टिन लुथर र उनी जस्तै अरूहरूले घरीघरी उठाएको आवाज यो थियो: “_____________ले के _________?” (रोमी ४:३)। बाइबल नै सर्वोपरि आधिकारिक परमेश्वरको वचन हो भनी प्रोटेस्टेन्ट सुधार अभियानका अग्रजहरू पूर्ण रूपमा विश्वास गर्दथे।
तपाईंले कुन कुरालाई आधिकारिक मान्नुहुन्छ? जीवनका मुख्य-मुख्य प्रश्‍नहरूको जवाफ तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? मुक्ति कसरी पाउने र स्वर्ग कसरी जाने भनेर थाह पाउन तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? तपाईंले आफ्नो अधिकारको स्रोत परमेश्वरलाई मान्नुहुन्छ कि पापी र त्रुटिपूर्ण (भूल गर्न सक्ने) मानिसहरूलाई? तपाईंको विश्वास मानिसका कुरामा छ कि परमेश्वरका कुरामा?
२. विश्वासद्वारा धार्मिकता (मुक्ति) – (Justification/Salvation by Faith)
मुक्ति कसरी पाइन्छ? अनन्तसम्मका लागि एक व्यक्ति परमेश्वरसित कसरी ठीक सम्बन्धमा आउन सक्छ? मानिस स्वर्ग कसरी जान सक्छ र अनन्त नरकको इन्साफ र दण्डबाट ऊ कसरी उम्कन सक्छ?
वर्षौंसम्म मानवीय धर्म प्रणालीले यो सिकायो कि कर्म (मान्छेको काम, प्रयास) द्वारा मुक्ति पाइन्छ। त्यसले भन्यो कि मुक्ति कमाउनका लागि मनिसले केही न केही गर्नैपर्छ। चर्चको नियम पालन गरेर, बप्‍तिस्मा लिएर, रोटी भचाइँमा भाग लिएर, दस आज्ञा पालन गरेर, प्रार्थना गरेर, धार्मिक रीति पूरा गरेर, असल जीवन जिउने प्रयास गरेर, आदि, इत्यादि गरेर मुक्ति पाइन्छ भनेर मान्छेको धर्मले सिकायो। कामहरूद्वारा कुनै न कुनै हिसाबले परमेश्वरको कृपा र आशिष कमाउन सकिन्छ अनि त्यसपछि ती कमाउन सक्नेहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गमा पस्न दिनुहुन्छ भनी तिनीहरूले सोचे।
मुक्ति कामहरूद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा मात्र पाइन्छ भनेर मार्टिन लुथर तथा अन्य सुधारकहरूले बुझे। “यसकारण ___________द्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले” (रोमी ५:१)। “तब हामी आफैले गरेका ________ ______________ द्वारा होइन, तर उहाँकै ________अनुसार उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुभयो” (तीतस ३:५)। एक व्यक्तिले मुक्ति कसरी पाउँछ, ऊ धर्मी कसरी ठहरिन्छ? आफ्नो विश्वास एकजना व्यक्ति, अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि राखेर नै हो। पापीहरूलाई बचाउन सक्ने केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्छ (१ तिमोथी १:१५, हिब्रू ७:२५)।
के तपाईं आफैले गरेका धर्मका कामहरू र असल कामहरूमा भरोसा गर्दैहुनुहुन्छ? के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंले असल बन्ने प्रयास गर्नुभएकोले परमेश्वरले तपाईंलाई स्वर्ग पस्न दिनुहुनेछ भनेर? के असल हुने प्रयासले तपाईं पवित्र र धर्मी परमेश्वरलाई खुशी पार्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो कुनै कामको बापत हामीले मुक्ति पाउँदैनौं, हामी केवल ख्रीष्टले क्रूसमा गरिसक्नुभएको कामद्वारा बचाइन्छौं। एफेसी २:८-९ पढ्नुहोस् जहाँ एक व्यक्तिले मुक्ति कसरी पाउँछ भनीलेखिएको छ।
३. प्रत्येक विश्वासीको पुजाहारीगिरी – (Priesthood of Every Believer)
सयौं वर्षसम्म मानवीय धर्म प्रणालीले यो सिकायो, “पुजाहारी” भनाउँदा विशेष समूह मात्र परमेश्वरको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जान सक्छ। एउटा साधारण विश्वासी सीधै परमेश्वरकहाँ जान सक्दैन; ऊ पुजाहारीको माध्यमद्वारा मात्र जान सक्छ। उसले आफ्ना पापहरूलाई परमेश्वरलाई सीधै बताउन सक्दैन; त्यसलाई उसले पुजाहारीकहाँ गएर “स्वीकार” गर्नुपर्छ। ऊ आफैले बाइबल बुझ्न सक्दैन; सही अर्थ पाउनलाई ऊ पुजाहारीमाथि भर पर्नुपर्छ। मान्छेको धर्मले यही सिकायो।
मार्टिन लुथर तथा अन्य सुधारकहरूले यो बुझे, बाइबलअनुसार प्रत्येक विश्वासी नै पुजाहारी हो (१ पत्रुस २:९ र प्रकाश १:६ पढ्नुहोस्)। प्रत्येक विश्वासी सीधै परमेश्वरकहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा जान सक्दछ। बाइबलले भन्छ, “किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ” (१ तिमोथी २:५)। यहाँ उल्लेखित एउटै मध्यस्थले हुनुहुन्छ (१ तिमोथी २:५)? _______________________।
कति सुन्दर सत्यता! प्रत्येक विश्वासी जन प्रार्थनामा परमेश्वरकहाँ सीधै जान सक्छ! प्रत्येक विश्वासीले आफ्ना पापहरूलाई सीधै परमेश्वरसँग स्वीकार गर्न सक्दछ, किनभने पाप भनेको उहाँकै विरूद्वमा गरिएको काम हो (१ यूहन्ना १:९)! प्रत्येक विश्वासीले बाइबल आफै पढ्न र अध्ययन गर्न सक्छ र परेमेश्वरले उसलाई सिकाउनुहुन्छ र अर्थ खुलाउनुहुन्छ भनी उहाँमा भर पर्न सकिन्छ।
के तपाईं पुजाहारी हुनुहुन्छ? के तपाईं जीवित परमेश्वरकहाँ सीधै जान सक्नुहुन्छ? तपाईं पिताकहाँ आउन सक्नलाई के तपाईंले ख्रीष्टसित ठीक सम्बन्ध गाँस्नुभयो? (यूहन्ना १४:६)? के तपाईं अझै पनि अन्धकारमा हुनुहुन्छ कि तपाईंलाई परमेश्वरले यी तीनओटा महान् सत्यताहरू देखाइसक्नुभयो?
« मण्डलीको जन्मदिन
तपाईंले मुक्ति पाउनुभएको दिन »